कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा पुनः संक्रमण किन फैलदैछ ? – korea pati
कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा पुनः संक्रमण किन फैलदैछ ?
June 24, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा पुनः संक्रमण किन फैलदैछ ?
कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा ९० लाख बढी संक्रमित छन् । यसमध्ये ४८ लाखले कोरोनालाई जितेका छन् ।
जबकी कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै औषधि वा खोप तयार भइसकेको छैन । यसैले जतिपनि कोरोनालाई जितेर घर फर्केका छन्, त्यसमा उनीहरुको प्रतिरक्षा क्षमताले खास काम गरेको छ ।
खासगरी शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा बनेको एन्टीबडीजको कारण ।सामान्यत शरीरमा कुनै भाइरस वा ब्याक्टेरियाका विरुद्ध जब एन्टीबडीज बन्छ, तब एन्टिबडिजले शरीलाई उक्त विशेष भाइरसबाट लामो समयका लागि रक्षा गर्छ । अर्थात केही बर्षसम्म वा जीवनभरका लागि एन्टिबडिजले सो भाइरसलाई हावी हुन दिदैन ।
तर, कोरोना भाइरसको हकमा अलि फरक नतिजा आएको छ ।एक नयाँ अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसको विरुद्ध मानव शरीरमा जुन एन्टीबडिज बनेको छ, त्यसले बढीमा २–३ महिनासम्म मात्र असर गर्छ । के त्यसो भए कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भइसकेपछि पुन उनमा यो भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम छ ?
अहिलेका घटनाहरु हेर्दा यस्तै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले कोरोना संक्रमित निरन्तर बढ्दो छ । उन्नत चिकित्सा पद्धती भएको मुलुक समेत कोरोना भाइरस सामु निरिह हुँदै आएको छ । विश्वका ४० बढी मुलुकमा कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको संक्रमण फैलने संकेत देखिएको छ ।
के यसको संक्रमण पुन दोहोरिन्छ ?
कोरोना भाइरस बिरुद्ध मानव शरीरमा जुन एन्टीबडिज बनेको छ, त्यसले केवल दुई–तीन महिनासम्म मात्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सकेको देखिन्छ । किनभने कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकाहरुमा केही महिना बित्न नपाउँदै पुन संक्रमण फैलिएको घटना धेरै देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस एन्टीबडीजमाथि गरिएको एक अध्ययन जुन, नेचर मेडिसिन नामक जर्नलमा प्रकासित भएको छ । उक्त शोधका लागि वैज्ञानिकले ३७ जना यस्ता व्यक्तिलाई छनौट गरे जुन भाइरस परीक्षणमा पोजेटिभ आएका थिए । जबकी उनीहरुको शरीरमा कुनै लक्षण देखिएको थिएन । उनीहरुको शरीरमा जुन एन्टिबडिज बनेको थियो, त्यसलाई अरु ३७ जनाको शरीरमा बनेको एन्टिबडिजसँग तुलना गरियो । यसबाट के थाह पाइयो भने, जुन व्यक्तिको शरीरमा लक्षण देखिएको थिएन, उनीहरुको एन्टिबडिज एकदम कमजोर थियो ।
लक्षण नदेखाएको ८१ प्रतिशत व्यक्तिको एन्टिबडिज आठ हप्तामै निस्क्रिय हुन थाल्यो । जबकी जुन व्यक्तिमा लक्षण देखिएको थियो उनीहरुको ८ हप्तापछि यो एन्टिबडिज ६२ प्रतिशतसम्म निस्क्रिय देखिए । लक्षण नै नदेखिएका ४० प्रतिशत व्यक्तिको एन्टिबडिज त एकदमै कमजोर देखिए ।
वैज्ञानिकका अनुसार यो अध्ययन अहिले सानो स्तरमा मात्र गरिएको छ । तर, यसले कोरोना प्रवृत्तिका सम्बन्धमा मोटामोटी अवस्था देखाउन सक्छ । online khabar
ट्विटरले सुरु गर्‍यो ‘भ्वाइस ट्विट’ फिचर, अब बोलेरै ट्विट गर्न सकिने
जापानको नयाँ सुपर कम्प्युटर विश्वमै सबैभन्दा छिटो
युट्युबलाई सपिङ साइट बनाउने गुगलको योजना
October 16, 2020 Korea pati
September 6, 2020 Korea pati
अमेरिकी चुनावको ७ दिनअघिबाट फेसबुकले लिने छैन राजनीतिक विज्ञापन
September 5, 2020 Korea pati